Filankevitry ny minisitra: jerena akaiky ny fampivelarana ny nomerika | NewsMada
Filankevitry ny minisitra: jerena akaiky ny fampivelarana ny nomerika
Nankatoavina nandritra ny filankevitry ny minsitra, ny 9 jona teo, ny fiaraha-miasan’ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra amin’ny “cabinet de consultance Bearing Point”. Ezaka ataon’ny minisitera mikasika ny fanavaozana sy fampandehanana indray ny « Institut National des télécommunications et des postes » lasa antsoina hoe « Institut national de digitalisation » manomboka izao.
Efa nosafidin’ny Banky foiben’i Madagasikara tamin’ny fifampiraharahana mikasika ny « e- ariary » io kabinetra io. Asa miandry: ny fametrahana ny « document cadre », ny paikady hisian’ny « inclusion numérique » any amin’ny faritra sy ireo sampandraharaham-panjakana, drafitrasa hanaovana ny nomerika ho sehatra iray hampiroboroboana ny firenena, ary fijerena famatsiam-bola mifandraika amin’izany.
Ny amin’ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono, nankatoavin’ny Fida (1) ny famatsiam-bola andiany faharoa, iray tapitrisa dolara mahery kely, ho fanatanterahana ny tetikasa Pacpa II (2) any atsimon’i Madagasikara: Anosy, Atsimo Andrefana. Antso nataon’ny fitondrana sy ny Firenena mikambana noho ny kere. Ny famatsiam-bola voalohany 824 677 dolara, nanohanana ireo mpamboly sy ny tanora any ambanivohitra eto Analamanga.
Fantatra ihany koa fa ao anatin’ny fanomanana ny fandrafetana ny tetibolam-panjakana 2021, asiam-panitsiana izao ny minisiteran’ny Toekarena sy ny tetibola. Faritana momba ny vinavina mahakasika ny mety ho fidiram-bola noho ny zava-mitranga ankehitriny, ny ho lany amin’ny tetikasam-pampandrosoana ary ireo fandaniana eo anivon’ireo minisitera sy ireo andrimpanjakana.
Fida (1) : Fonds international de développement agricole
Pacapa II (2) : Projet d’appui à la commercialisation des produits Agricoles